Apple Maps dia hanampy famerenana endrika ho an'ny sarintanin'i Espana sy Portugal | Avy amin'ny mac aho
Tsy mbola nisy fanovana na fanatsarana ny fampiharana amin'ny sarintany any Espana sy Portugal, amin'ity indray mitoraka ity dia toa anjarantsika izao. Ny orinasan Cupertino dia hizaha toetra ny fampiharana ny sarintany manampy fanovana indray ny Maps.
Ny vaovao navoakan'ny haino aman-jery isan-karazany ao anatin'izany MacRumors mampiseho fa ny orinasa Cupertino dia fitsapana ity famolavolana Apple Maps vaovao any Espana sy Portugal ity. Ary toa manohy manatsara ny sarintany i Apple ary miasa mafy ka io fampiharana io no ampiasain'ny mpampiasa ny orinasa, mamela ny Google Maps ankilabao.
Lojika ny firenena voalohany nahazo ireo fanovana endrika ireo dia i Etazonia, Irlanda, Royaume-Uni ary KanadaTaty aoriana dia toa nifantoka tamin'i Espana sy Portugal i Apple hanampiana an'io fanitarana io amin'ny fampiharana Maps.
Mazava izany mpampiasa maro no mbola aleony ny Google Maps hamakivaky ireo sarintany na handraisana tari-dàlana rehefa mitondra fiara, mandeha na mitovy aminy, saingy marina ihany koa fa manatsara hatrany ny Apple Maps ary mihamaro ny mpampiasa mampiasa azy.
Fanatsarana ny fampahalalana sy ny antsipirian'ny tranobe, ny fanatsarana ny lafiny topografika ny fampiharana, ny fomba fijery nohatsaraina miaraka amin'ny fomba fijery tsotra manampy antsipirihany marobe momba ny atin'ny toerana toy ny zaridaina na tranobe ary maro hafa. Mampiseho izany fa mihatsara hatrany ny rindranasa ary afaka manohy mandray vaovao misimisy kokoa momba ny fanatsarana ny app Apple Maps izahay. Zava-dehibe ny ilazana izany ireo vaovao ireo dia mbola tsy mandeha intsony ankehitriny manao fitsapana fotsiny izy ireo ka ho tonga ny fotoana hanohizana miandry miaraka amin'ireo kinova Maps ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Apple Maps dia hanampy famolavolana endrika ny sarintanin'i Espana sy Portugal
Salama anio 1 Mey ao amin'ny sarin'ny paoma ao Espana, efa azoko ny endrika vaovao
Azonao atao izao ny mividy Mac mini M1 amin'ny safidy Ethernet 10 GB
Tsia, Apple tsy mikasa ny hamadika ny iPad ho Mac